iPhone-ka Flickr: In ka badan 15,000 oo sawir iyo kor u kac | Martech Zone
Sabtida, Juun 30, 2007 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Iyada oo leh buunbuuninta 'iPhone' midna ma helayo), waxaan u maleynayay inay xiiso laheyd in la arko dhaqdhaqaaqa ka socda Flickr iyo inta qof ee qaraabada ah ay sawirada dhigayaan ama ku saabsan iPhone ama iPhone-kooda. Waan ka nixiyay inaan arko in ka badan 15,000 oo sawir oo iPhone ah oo lagu dhajiyay Flickr!
Akhristayaashayda RSS, guji illaa boostada si aad u aragto muuqaalka filimka:
Kooxda Suuqgeynta Apple runti waxay uqalmayaan gunno midkaan!
Jul 1, 2007 markay ahayd 9:28 AM
Ma jecli iPhone. Mana la heli karo, wali (halka aan ku noolahay - ugu yaraan 6-9 bilood oo kale)…
Jul 1, 2007 markay ahayd 10:43 AM
Waxaan u maleynayaa in Apple ay ku fiican tahay inay dadka ku dhex wareejiso suuqgeyntooda. Meel ay shirkado badani xoogga saaraan wax soo saar kuna soo noqdaan maalgashiga, Apple waxay xoogga saarta 'qabow'. Waxay diiradda saaraan 'rabitaan' iyo 'baahiyo', oo lid ku ah caadada.
Taasi waxay tiri, Apple wuxuu leeyahay taariikh aad u dheer oo ah inuu wax ka dhigo 'shaqeyn' markii ugu horeysay iyada oo loo marayo wadista hal-abuurka alaabtooda. Waxaan ku raaxeystay mashiinka Apple xoogaa yar.
Dib u milicsiga, in kastoo… Hadda waxaan haystaa AppleTV (oo aan u daawado sida ugu badan ee TV-ga caadiga ah), MacBookPro, iyo G3 (caawimaad u baahan) iyo G4 (sidoo kale caawimaad u baahan). Labo sano kahor, waxba Apple ma aanan laheyn!
Ma qorsheynayo inaan helo taleefanka iPhone waqti dhow. Si fudud waa raaxo aanan awoodin hadda. Hadda… haddii loo shaqeeyahaygu doonayo inuu taas beddelo…. 🙂
Jul 1, 2007 markay tahay 4:10 PM
? iyo waxa layaabka leh (ee wali iga sii badanaya sanado badan kadib kumbuyuutar) ayaa ah in iphone uu leeyahay awood waxqabad oo ka badan G3. (Kahadalkeeda, sidee gacantaada ugu qabatay G3 labo sano kahor?)
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan jajabiyo in Apple ka badan yahay "qabow". Haa, waxay sameeyaan qalab qabow, laakiin xudunta aniga ayaa ah "way shaqaysaa". Ulama jaan qaadayaan sida PC-yada ay yihiin, laakiin markooda waxaad helaysaa wax ka shaqeeya sanduuqa. Maheli doontid xaddidaadyo badan oo aad beddeli karto. Waxaa laga yaabaa in qofku dhihi karo: Microsoft waxay aaminsan tahay in loo ogolaado adeegsadaha inuu haysto fursado badan. Apple waxay aaminsan tahay in dadka isticmaala badankood ay waxbadan ka yaqaanaan nolosha gudaha ee kumbiyuutarada, sidaas darteedna injineerada Apple ay kuu doortaan adiga.
Shaqooyinka qaarkood Mac ayaa u roon, dadka kalena waa PC. Nasiib wanaagse, khadadka ayaa noqdey kuwo sii xumaanaya goor dambe.
Labadaba KIA iyo Mercedes labadaba waxay kaa kala imaanayaan A ilaa B. Waa wax xoogaa ka raaxo badan midka kale…
Jul 2, 2007 markay ahayd 8:15 AM
Hagaag! (Waxaan dhawaan helay G3 iyo G4 - waa sheeko dheer, laakiin labadooduba waxay u baahan yihiin shaqo badan si ay qaabkoodii ugu soo noqdaan… oo lagu daray waxaan u baahanahay qaar ka mid ah kormeerayaasha, teebabka, iwm. Waqti uma helin inaan ku sii wado. )
Jul 2, 2007 markay ahayd 5:20 AM
Haa, Apple waxay wax ka dhigtaa "qabow" sida ka soo horjeedka tusaale ahaan IBM / Lenovo Thinkpads, oo si fudud "u shaqeeya", iyo "shaqo" ay aad uga duwan tahay "qabow"
Jul 2, 2007 markay ahayd 6:52 AM
taasoo mar labaad kuxiran qadkaaga shaqada 😉
(Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay waxa ololaha Apple uu ku ciyaarayo…)
Jul 2, 2007 markay ahayd 8:20 AM
Waxaan haystay 'Thinkpad' xoogaa ka hor oo way fiicnayd. Waxay ahayd leben, laakiin waxaan dul saarnaa 3 Nidaamyada Hawlgalka (Windows 2000, Win 98, iyo OS / 2). Xusuus xiiso leh. Waxaan haystaa MacBookPro hadda waana laptop-kii ugu fiicnaa ee abid soo maray - in kasta oo aan ka niyad jabay inaan dukaanka dhigo maalmo kooban. (Apple aad bay u rogtay si dhakhso leh - waan la dhacay).
Jul 5, 2007 markay tahay 4:43 PM
yaa! taasi waa sawiro farabadan O_O